Posted by မြရွက်ဝေ at 10:45 AM
အဲတော့.. အမတော့ အဲဒီ စာရွက်တွေ အားလုံး လွှတ်ပစ်တယ်.. :O
ဒီက သွားဆရာဝန်က အင်္ဂလိပ်လို မပြောဘူးတော့.. အဲဒါဆိုတော့ အမအမျိုးသား သွားပြဖို့အခန်းထဲဝင်ရင် အမပါ လိုက်ဝင်ရတယ်..ပြီးတော့ အမက dictionary လည်းဆောင်ထားရသေးတယ်။ အမျိုးသားက ဂျပန်စာသင်တန်းတက်ဖို့ ပြောလို့မရဘူး။ နည်းနည်းတော့ နားလည်တယ်.. ဆရာဝန်က ပြောလိုက်ရင် ခေါင်းညိတ်၊ ခေါင်းခါပဲ။ ညီမလေးတို့က ဂျပန်စာ နားလည်လို့တော်သေးတယ်နော်.. အမတို့က လုံးလုံးကို မသိတာ။ ကိုယ်သိတဲ့စကားလုံးတွေကျတော့ ဆရာဝန်က မပြောဘူးလေ.. :P တရက်သူ့ကို ထုံဆေးထိုးပေးမယ်လို့ပြောတာ အမတို့က ဆေးထိုးပေးမယ်ဆိုတာတော့ နားလည်တယ်... ထုံဆေးမှန်းမသိဘူးလေ.. အဲဒါဆိုတော့ တော်တော်လေး ရွာပတ်သွားတာပေါ့။ နောက်ဆုံး အသိတစ်ယောက်ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့ စကားပြောခိုင်းမှပဲ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်.. အဖြစ်က အဲဒီလို..တခါတလေလည်း ဆေးခန်းထဲဝင်ရင် ၂ ယောက်တခါတည်းဝင်ပြီး ဆရာဝန်ပြောတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ငြင်းခုန်နေရသေးတယ်.. :D အဲဒီလိုနဲ့ပဲ သူရဲ့ အံသွားကြီးကို operation လုပ်ပြီး ခွဲထုတ်ပစ်လိုက်ရတယ်.. အမက အလုပ်ရှိတော့ လိုက်မသွားနိုင်တော့ဘူး။ ဆရာဝန်က ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို အင်္ဂလိပ်လို စာရေးပြီး သူ့ကိုပြတယ်လေ.. ဆရာဝန်လည်း အမတို့နဲ့ကျမှပဲ အတော်လေး ဒုက္ခရောက်တော့တယ်.. :D
“နှုတ်“ “ရှုံ့“ ဖြစ်တာ ဘယ်နှစ်ရက် ကြာသွားလဲဟင်။ အိမ်ကြီးရှင်က ထီးကောက်သွားဆွဲတာ ညီမက ရယ်နေတယ်ပေါ့။ ဟဟ အတော်ဆိုး။ တူနှစ်ကိုယ်မရှိတော့ တူတစ်ကိုယ်ထဲ သွားနှုတ်သွားရတယ်။ အားကိုးစရာမရှိ ငိုချင်ပ။ မဇနိတော့ အဲဒုက္ခပြီးသွားပြီ။ နောက် ဒီဘလော့ခ်ကို လာရင် လက်ကိုင်ပ၀ါပါဆောင်ထားရမယ်။ ပြောအားရှိတဲ့လူတွေက ပြောတော့ ငိုချင်ပါတယ်ကွယ်။
အစ်မကလည်း ကိုယ်ဖြစ်တယ် ဆိုတုန်းကတော့ ငိုရယ်တယ်ဆိုပြီး အစ်ကို့အလှည့်ကျ ရယ်နေတာပဲ ဟီးဟီးး သွားကိုက်တာတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျ အငယ်တုန်းက အမေကအချစ်လွန်ပြီး ချို၂ အတိုက်လွန်လို့သွားတွေကမလှမပ သွားပိုးကလည်း အခုချိန်ထိ ထတုန်း စ်ိတ်ညစ်စရာကြီးဗျာ ဆားရေကြည်ငုံ အသားလေးတစ်ဖက်လောက် စားမိလို့ ကတော့ တစ်နေ့ လုံး လိမ့်နေအောင် ခံရတယ်း) ဒါပေမယ့် ဆေးခန်းတော့မသွားဘူး နှုတ်ခံရမှာကြောက်လို့:P
( သီချင်းရတယ် အစ်မရေ့ ပို့ ပေးတာကျေးဇူးဗျ )
မnu-san---> အမျိုးသားကို မေးကြည့်တော့ အထူးသီးသန့် နယ်မြေခွန်နဲ့ မြို့တော်ခွန် (特別区民税．都民税)ဆောင်ဖို့ လျှောက်လွှာတင်ရတဲ့အခါ အဲလို အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ စာရွက်တွေနဲ့ တွဲတင်ရင် အခွန်လျှော့ပေါ့ပေးတယ်ပြောတာဘဲ။ ညီမတစ်ယောက်ထဲဆို နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဂျ။ ဂျပန်ကလဲ စာရွက်စာတန်းတွေ အတော်ရှုပ်တာဘဲ။ သိမ်းထားရတဲ့ စာရွက်တွေ အိပ်တလုံးနဲ့ မနဲဘူးရယ်။
မဇနိ---> "ရှုံ့"နေတာ ဒဏ်ရာမကျက်မချင်းလေ။ :P
မောင်မျိုး---> အမငိုတာ ကြောက်လို့ဟုတ်ဘူး၊ အမေအနားမှာမရှိလို့ :D။ သွားနာတာမကြောက်ပေါင် ဆေးထိုးအပ်ဘဲ ကြောက်တာ။ ဒီမှာ သွားဆေးခန်းပြရင် မျက်လုံးပေါ် ပဝါအဖြူအမြဲ အုပ်ပေးထားတယ်။ အပေါ်က ပါးစပ်ထဲကြည့်တဲ့ မီးလုံး မျက်စေ့စူးမှာစိုးလို့လားတော့ မသိဘူး။ ဆေးထိုးအပ် ကိုင်ထားလဲ မမြင်ရဘူးဆိုတော့ ကောင်းတယ်။ :P
မခင်ဦးမေ---> မမက ပိုအပြောကောင်း၊ အမစာတွေဖတ်ရင် ရီရတယ်။ "သိတ် တော. ဘဝင် မမြင့် လိုက် ရ ပါဘူး လေ။ ကိုယ် မှ မချက် ဘဲ. အခု တော. ကိုယ်. လက် ခုပ် ထဲ ကရေ ပြန် ဖြစ် သွား ပါပြီ" ဆိုးတာမျိုးလေ။ :D
မမနွေလည်---> မမနွေလည်ရေးတာလောက် လုံးဝမမှီပါဘူးဂျာ။ နော် ချစ်မ။
အရင်ကထဲက ဒီ Blog ကိုဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မနှုတ်ဆက်ဖြစ်တာ... Posts လေးတွေ ရေးထားတာ ကိုကြိုက်တယ်.. Template လေးရောပဲ..
tu nha ko..
nhar par twar pop :P
tooth and dentist consultation ..often burn big big hole in our pockets..!
it is equally expensive here ..in singapore